Vaovao - Ahoana no hampifaliana ny alika？
1 、 Ny zavatra mahafaly indrindra amin'ny alika
Ny alika dia mila fanatanjahan-tena bebe kokoa noho ny olombelona mba hahasalama, hahafaly ary hamoahana ny adin-tsaina. Alohan'ny fanaovana fanatanjahan-tena dia mila ampahatsiahivina ianao fa ny fihinanana alika alohan'ny fanazaran-tena mahery dia mora miteraka fandoavana, koa aza omena sakafo alohan'ny fampiharana mahery vaika; Raha aorian'ny fanaovana sakafo hariva dia aza avela hiala ilay rojo ary mihazakazaha mafy, raha tsy izany dia mora ny manana aretina lehibe.
2, Jogging olona sy alika
Jogging: Ity no fomba fanatanjahan-tena be mpampiasa indrindra amin'ny fiompiana alika any an-tanàna. Voalaza fa salama tsara ny tompona alika ary vitsy ny aretina. Ny teboka iray lehibe dia ny mihazakazaka sy manao fanatanjahan-tena amin'ny alika isika. Alika samy hafa isan-karazany manana hafainganam-pandeha mihazakazaka sy faharetana, ary ny fiaretana sy ny tanjaka ara-batana samy hafa ihany koa. Noho izany, raha mihazakazaka amin'ny alika ianao dia tsy maintsy misafidy hafainganam-pandeha mifanentana tsara. Ohatra, ny alika be mihazakazaka toa an'i Labrador sy ny volo volamena dia tena mety ho an'ny lehilahy mihazakazaka; Ireo mpiandry omby sisin-tany izay mahay mihazakazaka loatra dia tsy maintsy manana namana matihanina hanaraka azy; Ny vehivavy dia mety kokoa mihazakazaka miadana miaraka am alika toy ny VIP sy bera, izay tsy mora haratra.
Fiofanana miaraka amin'ny alika
Ankoatry ny alika mety amin'ny filalaovana jogging dia zava-dehibe koa ny fahazoana mifehy ny olona sy ny alika. Amin'ny voalohany, ny tompon'ny biby dia mila misintona tady hifehezana ny hafainganam-pandehan'ilay alika mba hisorohana ny vaky (jereo ny rohy etsy ambony amin'ny fiofanana miaraka aminy), mba hahafahany miandalana amin'ny hafainganam-pandehan'ny tompona biby sy ny hafainganam-pandehany ary mitazona tsy fitoviana, ary avy eo diniho ny tady mahazaka izay afaka mihodina 360 degre mifatotra malalaka amin'ny andilana.
Ny fitondrana ny alika hivoaka amin'ny jogging koa no fomba tsara indrindra ahafahan'ny alika hisotro rano. Betsaka ny namana miaraka amin'ny alika kely no nanontany ahy ny fomba ahafahako mampisotro rano alika bebe kokoa. Ny valiny dia ny mitondra rano iray tavoahangy miaraka amiko rehefa mivoaka mitsangatsangana ary mihazakazaka manome ny alika isaky ny 15-20 minitra. Ny hazakazaka dia hampafana azy. Mila rano be dia be io hanaparitahana ny hafanana, ka hisotro rano matetika. Ny fotoana hazakazaka dia miova arakaraka ny fahaizan'ny tsirairay. Amin'ny ankapobeny, azonao atao ny miala sasatra mandritra ny 15 minitra aorian'ny fihazakazanao mandritra ny 30 minitra mba hisorohana ny hafanana be, hafanana na ratra. Raha hitanao fa tsy te hanohy mihazakazaka ilay alika dia tokony hijanona ianao ary jereo raha misy ny ratra na ny tsy mahazo aina.
3 、 Milomano sy mandeha an-tongotra
Milomano: ny filomanosana no mety ho fanatanjahan-tena tsara indrindra, tsy ho antsika ihany fa ho an'ny alika koa. Sorohy ny tsindry lanin'ny alika amin'ny tongotra, indrindra rehefa alika be loatra ny fanaovana fanatanjahan-tena tafahoatra, manahy ny amin'ny fahasimban'ny fiaraha-miasa izy ireo, raha milomano anaty rano kosa tsy manana ahiahy toy izany. Mandritra ny famerenana amin'ny laoniny ny alika misy aretina iraisana na aorian'ny fandidiana dia hanome torohevitra ny biby fiompy izahay mba hilomano bebe kokoa. Ny fivoaran'ny rano dia hampihena be ny tsindry amin'ny tonon-taolana sy ny hozatra fanatanjahan-tena miaraka amin'izay. Ny alika dia tsy teraka mba hilomano. Mianatra milomano izy ireo ny ampitso. Na izany aza, satria ny fijalian'ny alika dia mitovy amin'ny fihazakazahana, raha mbola resin'ny alika ny tahotra dia afaka mianatra milomano ao anatin'ny minitra vitsy izy.
Amin'ny fotoana voalohany hidiranao ao anaty rano dia tsy tokony omenao irery ilay alika ao anaty rano. Izany dia hitarika mora amin'ny aloky ny alika. Ny tsara indrindra dia ny hijoroan'ilay alika ao anaty rano miaraka amin'ny alika eny am-pelatanany. Voalohany indrindra, aza hadino ny mamatotra ny vozon'akanjo sy ny tady mahazaka. Ny tompon'ny biby fiompy dia mijanona etsy ankilany ary misintona ny alika mankany amin'ny lalana voafaritra. Raha mbola raikitra ny làlan-kaleha dia hiova ny vatan'ilay alika avy amin'ny mitsangana ka hatrany amin'ny mitsivalana anaty rano mandritra ny fihetsehana. Milomano voajanahary amin'ny fitsoratry ny tongony izy io. Raha mbola milomano imbetsaka izy dia handresy ny tahotra ary ho lasa tia rano.
Na milomano ao anaty farihy, renirano na ranomasina ianao dia tsy maintsy mitazona ny rano hisorohana ny aretin'ilay alika ateraky ny bakteria be loatra ao anaty rano maty. Aorian'ny filomanosana dia azonao atao ny manasa ny hoditra sy ny volon'ilay alika amin'ny rano madio, ary milatsaka 1-2 indray mipetaka ny maso miady amin'ny inflammatoire hialana amin'ny areti-maso.
Ny toerana mety hanapoizinana ny alika
Fitsangatsangana an-tongotra: Ity dia iray amin'ireo ankafizin'ny alika, saingy miankina amin'ny asan'ny tompona biby, ka matetika amin'ny faran'ny herinandro ihany no misy azy. Ny faritra be tendrombohitra any amin'ny tanàna manodidina ny tanàna, ny morontsiraka amoron-dranomasina ary ny ahitra misy olona vitsivitsy dia toerana tena tsara haleha. Mazava ho azy, amin'ny toerana misy olona maro dia tsy maintsy mamatotra ny tady mitazona ianao na mametraka ny fonon'ny vava mihitsy aza. Andraso mandra-pahatongan'ny tsy misy olona, ​​ary avy eo andramo avelao handeha ary avelao izy hihazakazaka malalaka. Mialona ireo tompona biby fiompy monina eny amin'ny toerana misy tendrombohitra sy rano aho. Afaka mitondra ny alikany hilalao izy ireo rehefa afaka. Marihina fa mbola hisy maripaka bebe kokoa eny an-tendrombohitra, noho izany dia tsy maintsy atao ara-potoana ny famonoana bibikely in vitro, ary hiantohana ny vokatry ny famoahana bibikely sy ny tady; Ho fanampin'izay, makà rano fisotro ampy hisorohana azy ireo hisotro rano maloto any ivelany; Farany, ny ankamaroan'ny fitsangantsanganana dia maharitra fotoana lava ary ny làlana dia tsy ny tany fisaka eto an-tanàna, noho izany dia azon'ny alika atao tsara ny mamono ilay hena. Ny zavatra voalohany tokony hatao aorian'ny mody dia ny manamarina raha simba ny hena nofon'olombelona. Raha maratra dia diovy eo no ho eo ny ratra ary tsaboina miaraka amin'ny menaka manitra manohitra ny inflammato ny ratra.
Miaraka amin'ny asan'ny tompona biby fiompy be mpampiasa, ny fanatsarana ny fari-piainan'ny olona sy ny tsy fahampian'ny fahalalana momba ny fahasalaman'ny biby, dia mihabetsaka ny alika matavy. Aza miandry alika hanana aretina ara-batana na fahaketrahana noho ny fanerena ara-tsaina tafahoatra alohan'ny hanombohana fanatanjahan-tena. Ny fanatanjahan-tena antonony isan'andro no safidy tsara indrindra ho an'ny alika sy tompona.